Maxaa Kasoo Baxay Kulmada Caadifada Ku Dhisan Ee Xukuumadda Siilaanyo Ku Qabato Madaxtooyadda Ee Khal-khaliyay Suuqa Ganacsiga | Araweelo News Network
Maxaa Kasoo Baxay Kulmada Caadifada Ku Dhisan Ee Xukuumadda Siilaanyo Ku Qabato Madaxtooyadda Ee Khal-khaliyay Suuqa Ganacsiga
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta kulan ballaadhan la yeeshay Ganacsatada waaweyn ee dalka. Kulankan oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada waxa Madaxweynaha ku wehelinayey Madaxweyne-ku-xigeenka, Wasiirka Arrimaha Gudaha, W. Madaxtooyada, W. Maaliyadda, W. Ganacsiga & Maalgashiga, W. Qorshaynta Qaranka, W. Duulista Hawada, W. Difaaca, W. Dawlaha Madaxtooyada, W. Dawlaha Amniga Qaranka iyo Madaxda Sare ee Baanka Dhexe JSL iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Xukuumadda.
sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda, waxa Weftiga ganacsatada ee Madaxweynaha la kulmay hoggaaminayey Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Dalka.
Ujeedada ugu muhiimsan ee kulanku wuxuu ahaa:
1) In Xukuumaddu ay Ganacsatada Dalka kala hadasho doorka kaga beegan kor u qaadidda kalsooonida, aaminaada iyo adeegsiga Lacagta Shilinka Somaliland iyo sidii Xukuumad, Ganacsato iyo Shiciba la isaga kaashan lahaa ka hortagga qiimo dhaca lacagta Qaranka Jam. Somaliland.
2) In war-bixin laga dhagaysto Guddidii uu Madaxweynuhu u saaray (03.12.2015) inay xog buuxda ka soo ururiyaan sicir-bararka, isla markaana ay ka soo talo bixiyaan wixii arrintaa lagu xallili karo.
Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Silaanyo oo shirka furay wuxuu ugu horraan Ganacsatada uga mahad-celiyey sida xurmada leh ee ay codsigiisa u ajiibeen ee ay kulanka uga soo qayb galeen, waxana uu yidhi:
“Mudanayaal, Sharaf weyn bay ii tahay in aan maanta idiinku yeedho kulankan qaybo ka mid ah ganacsatadiinii dalka. Shirkan waxa ay ujeeddadiisu tahay in aynu isku dhiiri-gelino isticmaalka lacagteena, isla markaana war-bixin ka dhagaysanno Guddidii aan u saaray in ay ka soo talo-bixiso sicir bararka iyo qiima-dhaca shillinka Somaliland. Sida aad la socotaan dal kasta wuxuu leeyahay calan iyo cumlad u gaar ah. Haddaba, Qarankani lacagta uu leeyahay waa shillinka Somaliland. Sidaa darteed, ummad ahaan waxa waajib inagu ah in aynu aamino oo ilaalino qiimaha ay leedahay. Waa ceeb iyo quudh in aynu lacagteenii ka cararno ama isticmaali wayno Shacbi iyo Dawladba. Arrintani maaha mid la aqbali karo, mana aha mid dib loogu dulqaadan karo.”
Madaxweyne Axmed Silaanyo mar uu Ganacsatada Dalka kala hadlayey doorka uga bannaan kor u qaadidda kalsooonida Lacagta Qaranka wuxuu yidhi:
“Mudanayaal, Ganacsatada halkan fadhida iyo kuwa maqanba ka codsanayaa in ay nagu gacan siiyaan sidii qarankan lacagtiisa loo aamini lahaa, loona isticmaali lahaa. Waxaan idinka rajaynayaa in aad hormood ka noqotaan meel marinta mashruucan lagaga hortagayo qiima dhaca shillinka Somaliland. Isticmaalka, qiime u yeelidda iyo aaminaada lacagteenu waa talaabooyinka ugu mudan ee Xukuumad ahaan aannu Sannadkan (2016-ka) xaqiijinayno Insha Allaahu. Waxaan Ganacsatada halkan fadhida iyo kuwa maqanba ka codsanayaa in ay nagu gacan siiyaan sidii qarankan lacagtiisa loo aamini lahaa, loona isticmaali lahaa.”
Madaxweyne Axmed Silaanyo isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi:
“Mudanayaal, Qiime u yeelidda iyo aaminaada lacagta dalkeenu waa siyaasad Qaran oo u baahan in si buuxda oo dhammaystiran la isu garab taago. Haddaba, si siyaasadan loo meel mariyo, waxay Guddidii aan u saaray arrintaas ay ka soo jeedin doonaan warbixin iyo go’aamo. Waxaan idinka rajaynayaa in aad hormood ka noqotaan meel marinta mashruucan lagaga hortagayo qiima dhaca shillinka Somaliland. Sidoo kale waxaanu dhiniciina soo dhaweynaynaa wixii talo iyo tilmaamo ah ee wax lagu toosinayo. Waxaan soo dhaweynayaa wixii dhaliilo ah ee aad Xukuumaddayda u soo jeedinaysaan.”
Madaxweyne Axmed Silaanyo mar uu Ganacsatada Dalka kala hadlayey doorka ay ku leeyihiin dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Qaranka wuxuu yidhi:
“Mudanayaal, Maamulkaygu wuxuu garwaaqsan-yahay in ganacsatadu tahay laf-dhabarta horumarka, door weyna ay ka qaataan shaqo abuurka, dib-u-dhiska, adkaynta amniga iyo koboca dhaqaalaha dalka. Sidaa darteed, aniga oo munaasibadan ka faa’iidaysanaya waxaan jecelahay in aan idinku hambalyeeyo hal abuurka iyo himilooyinka Qaran ee aad hirgaliseen.” “Isku-duubni, dedaal iyo dal-jacayl ayaa inoo dardaaran ah”, ayuu Madaxweynuhu hadalkiisii ku soo gaba-gabeeyey.
Kulankii uu Madaxweynuhu la yeeshay Ganacsatada waaweyn ee dalka waxa iyaguna ka hadlay Wasiirrada Arrimaha Gudaha, Madaxtooyada, Maaliyadda iyo Duulista Hawada kuwaasoo dhinacooda sheegay in dulucda shirku ahaa sidii Xukuumadda iyo Ganacsatadu uga wada hadli lahaayeen kor u qaadista, aaminaada iyo isticmaalka lacagta Somaliland isla markaana looga hortagi lahaa in qiimo-dhac ku yimaad Lacagta Dalka. Wasiirradu waxay Ganacsatda u xaqiijiyeen inaan xanuunka la daaweyn karin ilaa aad garwaaqsato inaad bugto. Sidaa darteed, arrinta ay Xukuumaddu dawaynayso ma aha Sicir-barar dalka ka jira, waayo sicir bararku waa wax gaar ah. Laakiin, arrinta ay Xukuumaddu ka daaweynteeda ka shaqaynayso waa Sarrif-barar taasoo keentay in lacagtii Somaliland uu qiimo dhac ku yimid taasina ay u baahan tahay talo qaran oo loo dhan yahay.
Wasiirka Wasaardda Madaxtooyada Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka mid ahaa Guddidii uu Madaxweynuhu u saaray talo-bixinta sicir-bararka oo kulankaasi si mug leh uga hadlay wuxuu sheegay sida ay Qaran ahaan muhiim u tahay inaynu gacmaha isku qabsano oo aynu u midowno wanaajinta lacagteena, waayo waa wax aynu wada leenahay. Wasiirku wuxuu sheegay in qiimo dhaca lacagteenu uu soo taagnaa ilaa 1994-kii ilaa maalintii la daabacay, intaana waxa lagu waday xal ku-meel-gaadh ah, laguna dawaynayey, maanta waxa aynu u baahanahay xal waara oo salka u dhiga qiimaha lacagteena iyo aaminaadeeda. Xukuumad, Ganacsato iyo Shacbigaba waa inaynu lacagteena isticimaalno oo ay aamino.
Wasiir Maxamuud Xaashi wuxuu Ganacsatada si luxdan ugu sheegay in loo baahan yahay inaynu dhammaanteenba ka hor tagno in lacagtii Qarankeenu ay ku soo ururto Baanka oo kaliya iyo nin Sarrifle ah, waana sida ay hadda ku socoto haddii aanay xal helin. Wasiirku wuxuu sheegay in qaybaha kala duwan ee Hay’adaha Dawladda iyo bulshada Somaliland ay si waddaniyad leh u isticmaalaan lacagtooda ah Shillinka Somaliland, iyadoo madaxda qaranku ay iyagu iska bilaabaan dhiirigelinta iyo isticmaalka lacagta dalka. Gebagabadii hadalkiisa Wasiirka Madaxtooyadu wuxuu Ganacsatada u faah-faahiyey qodobo dhawr ah oo ay Xukuumaddu soo saartay kuwaasoo wax lagaga qabanayo qiime dhaca iyo aaminaad la’aanta Shilinka Somaliland.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga JSL ayaa isaguna ka hadlay kulanka waxana uu Xukuumadda ku bogaadiyey dedaalka ay ugu jirto si wax looga qabto qiime dhaca lacagta dalka iyo la dagaallanka sicir-bararka. Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in qiimo dhaca lacagteenu uu soo taagnaa ilaa 1994-kii, ummaddeenuna ay qabatimeen lacag aynaan dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan toona lahayn, taasina ay tahay ta keentay kalsooni darrada iyo aaminaad la’aanta lacagta dalka. Guddoomiyaha iyo ganacsato dhawr ah oo iayaguna kuanka ka hadlay waxay soo dhaweeyeen tallaabooyinka ay Xukuumaddu qaaday si loo kobciyo kalsoonida ay ummadeenu ku qabaan lacagtooda. Waxay hoosta ka xarriiqeen in loo baahan yahay in la tayeeyo Baanka Dhexe ee Dalka si uu awood ugu yeesho jaan-goynta siyaasadda lacagta qaranka. Sidoo kale waxay Xukuumadda si adag ugu boorriyeen in Xukuumaddu si dhab ah u fuliso tallaabo kasta oo lagu soo celinayo kalsoonida iyo qiimaha lacagta qarankaka, taasoo ah masuuliyadda Dawladda.
Isku soo wada duuboo, kulankan uu Madaxweyne Axmed Silaanyo la yeeshay Ganacsatada Dalka ayaa ku dhamaaday Is-afgarad iyo Guddoon wacan kaasoo salka ku haya in la iska kaashado sidii lacagta Dalka loo aamini lahaa, loona isticmaali lahaa, taasoo ay ku jirto danta iyo maslaxadaha Qarankeenu.” ayaa lagu yidhi qoraalka.
Dhinaca kale dadka aqoonta u leh arrimaha dhaqaallaha iyo xeel-dheerayasha ganacsiga, ayaa ku tilmaamay tallaabooyinka Xukuumadda Madaxweyne Siilanyo ee arrimaha sarufka dollarka mid caqli cilmi midna ku fadhiyin oo lagu hagayo caadifad, taas oo ay sheegeen in aanay waxba natiijo ah keenayn, balse ay xaalada uga sii daray sida hadda muuqata, isla markaana abuuri karta dhibaato aan loo baahanayn iyo dhaqaalle bur-bur soo waajaha dadka ganacsiga yar yar haysta iyo dadka masaariiftoodun ku xidhantahay lacagta adag ee dollarka.